China I-Bamboo Veneer Sup abakhiqizi nabaphakeli | IPanda
IBHODI ELIKHULU LE-BAMBOO PADDLE LIHLE NGOKUQHELEKILE elinensimbi emnyama lenza leli bhodi libe ucezu lomsebenzi wobuciko ukuze likhombise kubo bonke abangane nomndeni wakho. Phatha leli bhodi ngemoto encane, iloli, noma ophahleni lwendlu yakho bese uya emanzini, jabulela nomndeni wakho, abangani ngesikhathi esijabulisayo.
Vikela igama: Bamboo veneer SUP
Izinto: I-EPS foam core (26KG / CBM) + umucu wokhuni + 1 ungqimba 0.5mm bamboo veneer + 3 ungqimba we-epoxy resin w / 6OZ fiberglass indwangu ngaphezulu + 2 ungqimba we-epoxy resin w / 6OZ fiberglass cloth on bottom + high gloss epoxy qeda.
Idizayini: ngezifiso ubuso obunye bamboo + ubuso obunye be-epoxy fiberglass / ubuso obabili be-bamboo veneer ngaphezulu nangaphansi.
Isesekeli sokukhokhwa kwamahhala: 9ft plastic single middle fin + 2 small side plastic FCS fin / 9ft plastic single middle fin + 2 small side plastic Future fin
Idizayini yamahhala: singanikeza ukwakhiwa kwamahhala, noma ungasithumela ukuklanywa kwefayela le-AI yefayela / ifayili le-PDF ukukhiqiza.
1) Umnyama ulula futhi umbala wakudala kukho konke ukwakhiwa kwebhodi, lo mbala ungafanisa ukwakheka okuningi okuhle. Ungenza iphedi emnyama, ujantshi omnyama, i-bungee emnyama ne-logo emnyama, ibhodi lipholile kakhulu, futhi ukuthengisa imfashini unyaka wonke.
2) Uma ucabanga ukuthi ibhodi lakho likhetheke kancane, ungenza ushintsho olulandelayo. Khiqiza ibhodi elilodwa le-bamboo veneer, indlela yendabuko ohlangothini olulodwa noma ezinhlangothini ezimbili yisikhumba soqalo, kepha manje ungenza nomhlobiso ebhodini loqalo, ungafaka uphawu olukhulu ebhodini, iphethini lezimbali ezintekenteke, ukwakheka okwenziwe ngezifiso, ojantshi bombala, intando yebhodi ibukeka yehlukile, lokhu kufanele ubuntu bakho.
I-3) I-Bungee tie ingakhuphuka phezulu nangaphansi, impela nawe awudingi ukuthi ukhuphuke, intambo yemithwalo ingaboshelwa phansi, ekudlaleni ngenkathi imithwalo ingeke iwele emanzini.
Langaphambilini I-12-18 psi 100mm 150mm yokwehlisa okugoqa amaphiko epulasitiki wamahhala ahlukanisa ukuphuma kwephakheji elivela eChina lekhwalithi ephezulu yokulethwa okusheshayo kwebhodi elifuthwayo.
Olandelayo: ICarbon Fibre Sup